Hongria: “Polisy firy vao mahasambotra tsy manan-kialofana iray?” · Global Voices teny Malagasy
Hongria: “Polisy firy vao mahasambotra tsy manan-kialofana iray?”
Voadika ny 15 Oktobra 2011 16:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 한국어, русский, srpski, Shqip, Français, македонски, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
“Polisy firy vao mahasambotra tsy manan-kialofana iray?” no lohatenin'ny lahatsoratra nivoaka farany [hu] tao amin'ny bilaogy Kettős Mérce [Fomba Fiaina Roa], izay nahitana lahatsary iray mampiseho polisy valo misambotra lehilahy tsy manan-kialofana iray tao amin'ny distrika fahavalo ao Budapest.
Ny tena marina dia i Attila Kopiás io, izay mibilaogy amin'ny anarana hoe KA_Steve [hu], izay mody nanao tsy manan-kialofana, ary niaraka nifanampy azy tamin'izany ny mpibilaogin'ny Kettős Mérce, mandrakitra izay mitranga rehefa avy miantso ny polisy izy ireo ka milaza fa misy tsy manan-kialofana iray eo amin'ny sezalava iray ao amin'ny kianjan'ny distrika fahavalo.
Niteraka adihevitra lehibe ity resaka ity rehefa nandrara, tamin'ny alalan'ny fitsapa-kevi-bahoaka, tsy hahazoan'ny olona tsy manan-kialofana mandeha eny amin'ny kianja malalaka, ny Ben'ny tanàna tamin'ny Septambra. Nanaraka ny raharaha tao amin'ny distrika fahavalo io teny amin'ny fitsarana ny mpibilaogy ary namoaka didy [hu] manameloka ilay lehilahy noho ny “fipetrahana eo amin'ny vato miaraka amin'ny namany.”
Ny Lalàna voasoratra ara-bakinteny dia mandrara “ny fipetrahana eny amin'ny toerana malalaka ho fomba fiaina.” Niteny tamin'ny mpibilaogin'ny Kettős Mérce i Attila Kopiás tao amin'ny tafatafa iray fa niezaka ny tsy handainga amin'ny polisy izy, hany ka rehefa nanontany azy iretsy [polisy iretsy] raha “efa fiainany” ny mipetraka eny amin'ny toera-malalaka dia novaliany fa “ efa nisy fotoana taloha natoriany tamin'ny kianjam-bahoaka”.
Niteny tao amin'ny Kettős Mérce izy:
[…] Tsy nanana paikady mivelatra be aho, maharikoriko ahy fotsiny ny famaizana ny olona tsy noho ny zavatra nataony fa noho ny fiainana tsizarizary mahazo azy. Ny hevitro moa dia niainga tamin'ny fahatsapana hanohitra ity rafitra miangatra ity. Ankoatra izay, tsy eken'ny saiko ny fisian'izany amin'izao taona 2011 izao, eto Hongria, hoe azo samborina sy asiana rojovy ny olona iray fa nalaza nipetraka/natory teo amin'ny sezalavan'ny zaridaina iray. […] Tsy mitady olona hikarakara ahy aho, fa te-hahalala izay tena hitranga. […]
Tao anatin'ny Filazan-kevitra i KA_Steve no nanontany izay mahasamihafa ny olona manao picnic [mipetrapetraka an-jaridaina sy misakafo eny] amin'ny olona tsy manan-kialofana. Teo am-pieritreretana izany dia nisy kinovan'ny ‘Picnic in May’ – izay nataona artista Hongroà iray tamin'ny taonjato faha-19 – niely tao amin'ny Facebook, navoakan’ ny mpisera Tumblr Prolidepp voalohany an-tserasera.
Niantso katroka tao amin'ny bilaoginy [hu] i KA_Steve, hifampizara ny fomba ara-dalàna hanoherana ny lalàna manasazy ireo miaina eny an-dalambe, manosika saretim-pako na mangataka.
I Attila nanoratra izao [hu] tao amin'ny Kettős Mérce:
[…] Te-hampahalala azy ireo [tsy manan-kialofana] aho fa misy ny olona mijoro ho azy ireo. Amin'ny fomba itadiavantsika olona hijoro ho antsika rehefa sahiran-tsaina isika.